We Fight We Win. -- " More than Media ": ကြံ့ဖွတ်ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးဦး
ကြံ့ဖွတ်ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးဦးဟာ လက်ရှိအပြောင်းလဲ အခြေအနေကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်။ ဦးသန်းရွှေကို အာဏာ ပြန်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းနေတာ
၅ကြိမ်ရှိနေပြီ ဟုသိရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးသန်းရွှေက ငြင်းလိုက်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
သေသေချာချာ ကြည့်ရင် ဋ္ဌေးဦး မျက်ခွက် ဟာ ကြည့်လေကြည့်လေ ကြက်သရေ မဲ့လေ ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဌေးဦး နဲ့အောင်သောင်း ခင်ဗျားတို့ အလွန်ဆုံးလူ့ ပြည်မှာနေရတာ ရက်ပေါင်း 10,000 တစ်သောင်းပေါ့ဗျာ..မသေခင်လေးဝအောင်စားထားဦး...ပြီးရင်တော့ ငရဲမှာ ခံကြပေတော့ ...ဟား ဟား ဟား...(ငရဲမင်း)
All JUNTA and thier parnets,
You have destroyed the country for 50 years since 1962,at the time of your father/teacher,JUNTA,NE WIN.
It is almost enoungh.
It is time to get down from your seats!
I really impress with Ko Moe Thee's spy network which can cover General Than Shwe and USDP inside information. Yet why don't they try to assassinate them long ago as they claim they will do it in last few decades back?